एमाले–माओवादी एकताबाट को–को नेता असन्तुष्ट ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एमाले–माओवादी एकताबाट को–को नेता असन्तुष्ट ?
मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:२६ मा प्रकाशित !
काठमाडौं, ८ जेठ । एमाले–माओवादी बीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका केही नेता असन्तुष्ट देखिएका छन् । असन्तुष्ट हुनेहरुमा पूर्वएमालेका बढी नेता देखिएका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: विषाक्त खानाका कारण एकै गाउँका ८७ जना बिरामी
NEXT POST Next post: १० हजारका लागि अनुप र प्रशान्त बिच लडाइँ, कसले मार्यो बाजी ? (भिडियो)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:२६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:२६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:२६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:२६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:२६